မိန်းမတွေ ပေါလာသော်လည်း မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ် တွေ ရှားလာသော ယနေ့ခေတ်(ဒီစာလေးဖတ်ပြီး သင့်တန်ဖိုးဈေးဖြတ်ပါ) – Zartiman
မိန်းမတွေ ပေါလာသော်လည်း မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ် တွေ ရှားလာသော ယနေ့ခေတ်(ဒီစာလေးဖတ်ပြီး သင့်တန်ဖိုးဈေးဖြတ်ပါ)
Zar Ti Man | June 22, 2020 | Knowledge | No Comments
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာ သူ့လက်ထဲမှာ…. မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့စာရိတ္တဆိုတာ သူ့လက်ထဲမှာ….. ရေအိုင်အဆင့် လောက်ပဲရှိရင် တွေ့သမျှလူတိုင်း ခြေဆေးခံရတတ်တယ်။ဇရပ်အဆင့်လောက်ပဲရှိရင် သူတောင်းစား လည်း လာအိပ်နိုင်တယ် ….လူမိုက် များလေလေ ပညာရှိ တန်ဖိုးတက်လေလေ…. မိန်းမပျက်များလေလေ မိန်းမကောင်းလေးတွေ တန်ဖိုးတက်လေလေ…။
ဒါဟာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းဆိုရင် ခေတ်ပျက် လာတာကို လက်ခံပါ…. ယနေ့ခေတ် မြန်မာပြည် လူဦးရေ သန်း ၆၀ ကျော် မိန်းကလေးဦး ရေက ယောကျာ်းလေးဦးရေထက် အရမ်းများပါတယ်။ဒါပေမယ့် ညီမလေးရေ မိန်းမတွေပေါတယ် မိန်းမကောင်း မိန်းမ မြတ်တွေ ရှားလာ ပြီ သင့်တန်ဖိုးကို သင်ကိုယ်တိုင် ဈေးဖြတ်ပါ ! တန်ဖိုးမဲ့တဲ့ မိန်းကလေးစာရင်းထဲ ညီမလေး မပါစေနဲ့…။
တက်တူးထိုးတိုင်း မိန်းမပျက် မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လား? ဒါပေမယ့် ဂုဏ်သရေရှိ မိန်းမပျိုတိုင်း တက်တူး မထိုးကြဘူး..။ဆံပင် ဆေးရောင် စုံဆိုးတိုင်း မိန်းမပျက် မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လား? ဒါပေမယ့် အဆင့်အတန်း ရှိတဲ့ မိန်းမပျိုတိုင်း ပိတုန်းရောင်ကေသာလေးနဲ့ လှကြတယ်…အတိုအဟိုက်တွေ ဝတ်တိုင်း ပေါ့ပျက်ပျက်မိန်းမ မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လား? ။
ဒါပေမယ့် မိကောင်း ဖခင် သားသမီးတိုင်း လျပ်ပေါ်လော်လီ မဝတ်ကြဘူး….။အရက် ဘီယာ သောက်တိုင်း အပေါစား မိန်းမ မဟုတ်ပါဘူး ဟုတ်လား? ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ် မိန်းမမြတ်မှန်ရင် ကံငါးပါးကို မကျူးလွန်ကြဘူး….။ချစ်သူ ရည်းစားများ တိုင်း အပေါစား မိန်းမ မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လား? ဒါပေမယ့် မိန်းမကောင်းပီသတဲ့သူတိုင်း ပန်းကောင်းတစ်ပွင့်ပဲ ပန်တယ်……။
စေတနာဖြင့် ……. ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောပါတယ်…။ ။
မိနျးမတှေ ပေါလာသျောလညျး မိနျးမကောငျး မိနျးမမွတျ တှေ ရှားလာသော ယနခေ့တျေ(ဒီစာလေးဖတျပွီး သငျ့တနျဖိုးဈေးဖွတျပါ)
မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့တနျဖိုးဆိုတာ သူ့လကျထဲမှာ…. မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့စာရိတ်တဆိုတာ သူ့လကျထဲမှာ….. ရအေိုငျအဆငျ့ လောကျပဲရှိရငျ တှသေ့မြှလူတိုငျး ခွဆေေးခံရတတျတယျ။ဇရပျအဆငျ့လောကျပဲရှိရငျ သူတောငျးစား လညျး လာအိပျနိုငျတယျ ….လူမိုကျ မြားလလေေ ပညာရှိ တနျဖိုးတကျလလေေ…. မိနျးမပကျြမြားလလေေ မိနျးမကောငျးလေးတှေ တနျဖိုးတကျလလေေ…။
ဒါဟာ ခတျေရစေီးကွောငျးဆိုရငျ ခတျေပကျြ လာတာကို လကျခံပါ…. ယနခေ့တျေ မွနျမာပွညျ လူဦးရေ သနျး ၆၀ ကြျော မိနျးကလေးဦး ရကေ ယောကျြားလေးဦးရထေကျ အရမျးမြားပါတယျ။ဒါပမေယျ့ ညီမလေးရေ မိနျးမတှပေေါတယျ မိနျးမကောငျး မိနျးမ မွတျတှေ ရှားလာ ပွီ သငျ့တနျဖိုးကို သငျကိုယျတိုငျ စြေးဖွတျပါ ! တနျဖိုးမဲ့တဲ့ မိနျးကလေးစာရငျးထဲ ညီမလေး မပါစနေဲ့…။
တကျတူးထိုးတိုငျး မိနျးမပကျြ မဟုတျပါဘူးဟုတျလား? ဒါပမေယျ့ ဂုဏျသရရှေိ မိနျးမပြိုတိုငျး တကျတူး မထိုးကွဘူး..။ဆံပငျ ဆေးရောငျ စုံဆိုးတိုငျး မိနျးမပကျြ မဟုတျပါဘူးဟုတျလား? ဒါပမေယျ့ အဆငျ့အတနျး ရှိတဲ့ မိနျးမပြိုတိုငျး ပိတုနျးရောငျကသောလေးနဲ့ လှကွတယျ…အတိုအဟိုကျတှေ ဝတျတိုငျး ပေါ့ပကျြပကျြမိနျးမ မဟုတျပါဘူးဟုတျလား? ။
ဒါပမေယျ့ မိကောငျး ဖခငျ သားသမီးတိုငျး လပျြပျေါလျောလီ မဝတျကွဘူး….။အရကျ ဘီယာ သောကျတိုငျး အပေါစား မိနျးမ မဟုတျပါဘူး ဟုတျလား? ဒါပမေယျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာစဈစဈ မိနျးမမွတျမှနျရငျ ကံငါးပါးကို မကြူးလှနျကွဘူး….။ခဈြသူ ရညျးစားမြား တိုငျး အပေါစား မိနျးမ မဟုတျပါဘူးဟုတျလား? ဒါပမေယျ့ မိနျးမကောငျးပီသတဲ့သူတိုငျး ပနျးကောငျးတဈပှငျ့ပဲ ပနျတယျ……။
စတေနာဖွငျ့ ……. ယဘေူယအြားဖွငျ့ပွောပါတယျ…။ ။
ဈေးဝယ်ပြီး အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါ အင်္ကျီ၊ ဖိနပ်၊ ဆံပင်၊ သတင်းစာတွေမှာ ကိုဗစ်ပိုး ကပ်ပါလာနိုင်လား? ပါလာရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ?
(၇)ရက်သားသမီးများ အတွက် (၂၀၂၀)အောက်တိုဘာလ ဘ၀ကံကြမ္မာတစ်လစာ ‌ဟောကိန်း
လွှင့်ပစ် လိုက်ရတဲ့ သိန်းပေါင်း များစွာတန်သော အချင်းများ (သို့) မြန်မာတွေ ပညာတတ် ဖို့လိုပြီဆိုတဲ့ အကြောင်း